fahaizana - Hangzhou Fujie Outdoor Products Inc.,
Home » fahaizana
Fujie alàlana ho nividy tany am-boalohany izay Fujie entana dia afaka tamin'ny kilema in fitaovana na ny hafa mandritra ny taona iray manomboka amin'ny vaninandro fividianana. Fujie Tsy tompon'andraikitra amin'ny ABara-dalàna sy ny baomba anaovan'ireo, ny vokatra ara-barotra na ny tsy fahombiazana ampiasaina vokatry ny loza,fanararaotana, fanovana, fiovana,fanovana, Tafahoatra sy ny fikarakarana dratsy.
Tsy misy hafa fiantohana Express any an-dafin'ny teny ity Warranty voafetra. Tsy zava-nitranga dia nyNY Te hilaza fiantohana, anisan'izany ny merchantability sy ny Fitness ho tanjona iray manokana, hanitatra mihoatra ny faharetan'ny fiantohana ny mazava voarakitra etoana. Tsy zava-nitranga dia Fujie nilaza fa mendrika ho an'ny mpitranga na consequential damages.
Firenena sasany tsy mamela ny famerana ny fomba ela ny fiantohana Te hilaza maharitra na ny fanesorana ny fetra- ation ny mpitranga eo na consequential fahasimbana, toy izany koa ny fetra ambony na tsy mampihatra exclusions ny ianao.Izany fiantohana manome anao zo manokana sy ny hafa mety manana zo izay Miovaova arakaraka ny firenena ny firenena.